Shanta casriga ah ee ugu wanaagsan Android One ee 2018 | Androidsis
Eder Ferreño | | Aaladaha Android
Android One wuxuu ahaa mid kamid ah halyeeyada sanadka. Sannadka 2018, telefoonno badan ayaa la yimid noocyadan nidaamka qalliinka weligood, wadar ahaan shan iyo toban. Waxyaabo si weyn ugu soo kordhay, gaar ahaan ka dib bilowgiisii ​​cakiran ee suuqa taleefanka, sidaan horeyba kuugu sheegnay.
Labada sano ee nidaamka qalliinka la cusbooneysiinayo, in inkasta oo wararka xanta ah oo dhan aysan beddeli doonin, waa mid ka mid ah faa iidooyinka ugu weyn ee Android One. Wax shey ku guuleystey adeegsadayaasha nidaamka qalliinka. Sidaan soo sheegnay, wadar ahaan shan iyo toban taleefannada casriga ah ayaa yimid iyadoo leh noocaan ah nidaamka qalliinka. Dhexdooda waxaa jira kuwo badan oo laga fiirsado.
Sidaa darteed, hoosta waxaan kaaga tageynaa taleefannada ugu fiican ee leh midka loo yaqaan 'Android One' oo laga bilaabay dukaamada illaa 2018. Moodooyinka muujinaya in noocyadan nidaamka qalliinka ay aad u noolyihiin isla markaana leh fursado badan oo suuqa Android ah. Diyaar ma u tahay inaad la kulanto dhammaantood?
1 Xiaomi My A2
Xiaomi ayaa sanadkan naga tagtay jiilkaaga labaad ee telefoonada leh Android One. Jiilkan cusub waxaa madax u ah Xiaomi Mi A2, oo ah mid ka mid ah moodooyinka ugu caansan ee ku dhex jira heerka sare. Markaa waa tusaale lagu xisaabtamo, iyadoo ay u sii dheer tahay boodbooyin tayo leh marka loo eego jiilkii hore. Waxaad arki kartaa qeexitaankiisa oo buuxa link this.
Dhex-dhexaadkan wuxuu nooga tegayaa naqshad aan qaan-gaar ahayn, qaar tusaalooyin wanaagsan oo diirada la saarayo sawirka, iyo noocyadan nidaamka qalliinka oo ka madax bannaan lakabka habeynta ama codsiyada aan loo baahnayn. Isku-darka wanaagsan ee la tixgelinayo, iyo in sida jiilka koowaad, ay si aad ah uga shaqeyneyso suuqa.
Ma xiiseyneysaa Xiaomi Mi A2? Waad iibsan kartaa hadda, waqti xaddidan illaa a qiimaha 227 yuuro. La heli karo link this.
Oo ay la socdaan aaladda aan soo sheegnay, nooca Shiinaha ayaa bilaabay Xiaomi Mi A2 Lite. Waa taleefan aan u arki karno inuu yahay beddelka dhabta ah ee Mi A1 sanadkii hore. Tilmaamaha Wax yar baa la hagaajiyay, iyadoo fiiro gaar ah loo leeyahay batteriga, oo leh awood sare hadda, laakiin lagu hayo Android One.
Telefoonkani wuxuu yimid iyadoo shaashadda shaashaddeeda, mid ka mid ah isbeddellada sanadka, kuwaas oo si dhakhso leh u isbeddelay. Waa nooc kale oo wanaagsan oo dhex-dhexaadka ah, xoogaa ka fudud kan hore, laakiin si isku mid ah aad u xiiso badan. Intaa waxaa u dheer in xoogaa laga heli karo xagga qiimaha.
Maaddaama aad ka iibsan karto buuggan Xiaomi Mi A2 Lite bogadag ee 185,70 euro. Waad iibsan kartaa Wax alaab ah lama helin.
Motorola waxay ka mid ahayd noocyadii ugu dambeeyay ee nooga taga taleefanka Android One suuqa. Sida caadiga ah qaabkan qalliinka noocani ah, waa nooc gaadhaya badhtamaha. Markaa waa tartan toos ah qalabkan hore ee aan ka soo hadalnay. Dhex-dhexaadku waa qaybta ay Motorola ku guulaysato.
Sidaa darteed, waxay rabeen inay ku dabaqaan guushan qaab isku daraya qeexitaannada wanaagsan, in aad halkan ka arki karto, laga soo qaatay nooc dhexdhexaad ah, iyadoo laga faa’iideysanayo haysashada Android One sida nidaamka qalliinka. Markaa waa nooc heli doona cusbooneysiin ka hor aaladaha kale ee ku jira buugga shirkadda.
Qalabkan ayaa hadda loo heli karaa a Qiimaha 269 euro ee Amazon, mahadsanid qiimo dhimis 10% ah. Waad awoodaa halkan ka iibso
Calaamaddu waxay ahayd tii ugu horreysay ee soo saarta taleefanka Android One ee Yurub. In kasta oo aysan ahayn guul weyn, haddana waxay sii wadeen inay ku sharaddeeyaan qaybtan nidaamka qalliinka noocyadooda qaarkood. Sannadkan waxay nooga tageen laba aaladood oo cusub oo noocan ah, oo uu ka mid yahay Aquaris X2 Pro, oo aad ku arki karto qeexitaankiisa link this.
Waa taleefan in ka badan kulmaya iyada oo waxa aan ka filan karno moodel dhexdhexaad dhexdhexaad ah maanta. Qeexitaanno wanaagsan, oo leh kamarad gadaal laba-gees ah, shaashad leh muraayadaha khafiifka ah, iyo cusbooneysiinta degdegga ah mahadsanid Android One. Marka lagu daro haysashada dammaanad nooc ah BQ
Taleefankan hadda waxaa laga iibsan karaa a qiimaha 349,33 yuuro dallacaadda Amazon, halkan ka heli.
Nooca Nokia 8.1 wuxuu ka mid ahaa noocyadii ugu dambeeyay ee garaaca dukaamada. Taleefankan sumadda leh, la soo bandhigay horraantii bishan, wuxuu gaarayaa qaybta qiimaha dhexe, taas oo ahayd mid ka mid ah halyeeyada sanadka. Nokia waa mid ka mid ah noocyada doortay in aysan ku isticmaalin lakab shakhsiyeed taleefannadooda. Intaa waxaa dheer, bilawgii sanadka waxay mar hore faallo ka bixiyeen in taleefannadooda ay had iyo jeer isticmaali doonaan Android One.
Taleefankan waxaa lagu yaqaan magacyo kala duwan. Tan iyo markii lagu soo bandhigay Shiinaha sida X7, iyo Yurub Waxaa loo yaqaan Nokia 7 Plus ama Nokia 8.1 Marka waxay ku noqon kartaa jahwareer dadka isticmaala qaarkood. Laakiin waa taleefan wanaagsan, oo ka dhex muuqda muddadan heerka dhexe ah, mahadsanid adoo adeegsanaya Android One.
Waxaa laga heli karaa dallacsiinta a qiimaha 253 yuuro on Amazon. Waad awoodaa Wax alaab ah lama helin..
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Noocyada ugu wanaagsan ee Android One ee 2018